CLUTCH ỌRỤ NA EXCEL - EXCEL - 2019
Iji ọrụ CLICK na Microsoft Excel
Otu n'ime atụmatụ dị mma nke Microsoft Excel bụ ọrụ Iji kee. Ọrụ kachasị ya bụ ijikọta ọdịnaya nke mkpụrụ ndụ abụọ ma ọ bụ ọtụtụ na otu. Onye ọrụ a na-enyere aka dozie nsogbu ụfọdụ ndị na-enweghị ike ịme site na enyemaka nke ngwaọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, site n'enyemaka ya, ọ dị mfe ịrụ usoro nke ijikọta mkpụrụ ndụ na-enweghị ọnwụ. Tụlee ike nke ọrụ a na nuances nke ngwa ya.
Ngwa nke onye ọrụ CLUTCH
Ọrụ Iji kee bụ nke otu ìgwè Excel ọrụ ederede. Ọrụ kachasị ya bụ ijikọta ọdịnaya nke mkpụrụ ndụ dịgasị iche iche yana onye ọ bụla n'otu mkpụrụ ndụ. Malite na Excel 2016, kama onye ọrụ a, arụ ọrụ ahụ. Ụkwụ. Ma iji nwee ike ijikwa ọrụ na-aga n'ihu Iji kee na-ahapụ, a pụkwara iji ya mee ihe Ụkwụ.
Nkọwapụta maka nkwupụta a bụ:
Arụmụka nwere ike ịbụ ma ederede ma ọ bụ ntinye aka na sel ndị nwere ya. Ọnụ ọgụgụ nke arụmụka nwere ike ịdị iche site na 1 ruo 255 gụnyere.
Usoro 1: Jikọọ Data Sistem
Dị ka ị maara, njikọ nke mkpụrụ ndụ na Excel na-emekarị na-eduga ná nkwụfu data. Naanị data dị na aka ekpe aka ekpe ka echekwara. Iji jikọta ọdịnaya nke abụọ ma ọ bụ karịa sel na Excel na-enweghị ọnwụ, ịnwere ike iji ọrụ ahụ Iji kee.
Họrọ cell nke anyi na eme atumatu itinye data agwakọta. Pịa bọtịnụ "Tinye ọrụ". O nwere ihe ngosi akara ngosi ma dị n'aka ekpe nke usoro mmanya.
Na-emeghe Ọkacha Ọrụ. Na ụdị "Ederede" ma ọ bụ "Ndepụta ndepụta nke mkpụrụ akwụkwọ" achọ onye ọrụ "Pịa". Họrọ aha a ma pịa bọtịnụ. "OK".
A na-emepe windo arụmụka arụ ọrụ. Arụmụka nwere ike ịbụ ntinye ederede nke nwere data ma ọ bụ ederede dị iche. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ bụ ijikọta ọdịnaya nke sel, mgbe ahụ na nke a, anyị ga-arụ ọrụ naanị site na njikọ.
Debe cursor na akpa nke windo. Wee họrọ njikọ na mpempe akwụkwọ nke nwere data dị mkpa maka njikọ. Mgbe a gosipụtara nhazi na windo, anyị na-aga n'ihu n'otu ụzọ ahụ. Ya mere, họta cell ọzọ. Anyị na-arụ ọrụ yiri nke a ruo mgbe nhazi nke mkpụrụ ndụ niile dị mkpa ka ejikọta ya abanye na window arụmụka arụmụka. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị nwere ike ịhụ, ọdịnaya nke ebe ndị ahọrọ ahọrọ na otu cell dị na mbụ. Ma usoro a nwere ịrịba ama dị ịrịba ama. Mgbe a na-eji ya eme ihe, ihe a na-akpọ "ọhụụ na-enweghị ntụpọ" pụtara. Nke ahụ bụ, ọ dịghị ohere dị n'etiti okwu ndị ahụ ma ha ejikọta ọnụ n'otu otu. N'okwu a, jiri aka tinye ohere agaghị arụ ọrụ, mana naanị site na ịmezi usoro ahụ.
Usoro 2: jiri ọrụ a rụọ ọrụ
E nwere ohere iji dozie ntụpọ a site na ịtinye oghere n'etiti arụmụka ndị ọrụ.
Mee ọrụ dịka otu algorithm dị ka akọwara n'elu.
Pịa bọtịnụ òké aka ekpe na mkpụrụedemede cell ma megharịa ya maka edezi.
N'etiti esemokwu ọ bụla anyị na-ede okwu ahụ n'ụdị oghere, agbatị ya n'akụkụ abụọ site na ntinye. Mgbe agbakwunye onye ọ bụla dị otú ahụ bara uru, anyị na-etinye semicolon. Echiche n'ozuzu banyere okwu ndị agbakwunyere kwesịrị ịbụ ndị a:
Iji gosipụta nsonaazụ na ihuenyo, pịa bọtịnụ ahụ. Tinye.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ebe ịtinye oghere na ọnụego na cell, e nwere okwu nkewa n'etiti okwu.
Usoro 3: tinye ohere site na windo arụmụka
N'ezie, ọ bụrụ na enweghi ọtụtụ mgbanwe na-agbanwe agbanwe, mgbe ahụ, ọdịdị n'elu nke ọdịiche nke gluing zuru okè. Ma ọ ga-esi ike ịsụgharị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ dị mkpa ka ejikọta. Karịsịa, ma ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ndị a adịghị na otu. Ị nwere ike ime ka ntinye nke oghere dị mfe n'ụzọ dị mfe site n'iji nhọrọ iji tinye ya site na windo arụmụka.
Pịa ugboro abụọ pịa bọtịnụ aka ekpe ka ịhọrọ sel efu ọ bụla na mpempe akwụkwọ ahụ. Iji keyboard nyere ohere n'ime ya. Ọ bụ ihe na-achọsi ike na ọ na-anọghị na isi ihe. Ọ dị ezigbo mkpa na nchekwa a agaghị ejupụta na data ọ bụla mgbe nke ahụ gasịrị.
Mee otu nzọụkwụ ndị ahụ dịka ụzọ mbụ eji eji ọrụ ahụ. Iji kee, ruo mgbe windo esemokwu nke onye ọrụ ahụ mepee. Tinye uru nke cell mbụ ahụ na data dị na windo ahụ, dịka a kọwara ya na mbụ. Mgbe ahụ setịpụ cursor na ubi nke abụọ, wee họrọ sel efu na ohere, nke a tụlere na mbụ. Njikọ na-egosi na igbe igbe igbe. Iji mee ngwa, ị nwere ike idetuo ya site na ịhọrọ na ịpị nchikọta igodo Ctrl + C.
Wee tinye njikọ na ihe ọzọ iji gbakwunye. Na mpaghara na-esote, ọzọ tinye njikọ na cell efu. Ebe ọ bụ na anyị depụtara adres ya, ị nwere ike ịtọ ọbụla n'ọhịa ma pịa igodo ọnụ Ctrl + V. A ga-etinyere ndị nchịkọta. N'ụzọ dị otú a, anyị na-agbanye ubi na adreesị nke ihe ndị ahụ na sel efu. Mgbe niile abanyela, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dika ị nwere ike ịhụ, mgbe nke a gasịchara, e debere ihe ndekọ na-ejikọta na cell, bụ nke na-agụnye ọdịnaya nke ihe niile, mana na oghere n'etiti okwu ọ bụla.
Ntị! Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro a dị n'elu na-agba ọsọ ọsọ usoro nke ijikọta data n'ime sel. Ma ekwesiri iburu n'uche na ihe a na-eme bu "nsogbu". Ọ dị ezigbo mkpa na na mmewere nke nwere ohere, ka oge na-aga, ụfọdụ data anaghị apụta ma ọ bụ agbanweghị ya.
Usoro 4: Kọmịkọn Na-ejikọ
Iji ọrụ ahụ Iji kee Ị nwere ike ikpokọta data site na ọtụtụ ogidi n'ime otu.
Na mkpụrụ ndụ nke eriri mbụ nke ogidi ndị a jikọtara, anyị na-eme nhọrọ nke omume ndị akọwapụtara na usoro nke abụọ na nke atọ nke itinye arụmụka ahụ. N'eziokwu, ọ bụrụ na ị kpebie iji usoro ahụ na-enweghị ihe ọ bụla jiri usoro ahụ mee ihe, mgbe ahụ njikọ ahụ ga-adị mkpa. Iji mee nke a, anyị na-etinye ihe ịrịba ama dollar n'ihu nhazi nke nhazi nke ọ bụla na gburugburu nke cell a. ($). Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ kachasị mma ime nke a na mmalite, ka onye ọrụ ahụ nwee ike idetuo ya na mpaghara ndị ọzọ nwere adreesị a, ebe o nwere njikọ zuru oke. Na mpaghara ndị fọdụrụ na-ahapụ njikọ njikọ. Dị ka mgbe niile, mgbe ịmechara usoro, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Debe cursor na ala aka nri nke mmewere ya na usoro. Ihe ngosi na-egosi na obe, a na-akpọ akara njuputa. Jidea bọtịnụ aka ekpe ahụ wee dọpụta ya dịka ndokwa nke ihe ndị ahụ ka ejikọta.
Mgbe ịmechara usoro a, data ndị dị na kọlụm ndị a kapịrị ọnụ ga-ejikọta na otu kọlụm.
Ihe omumu: Otu esi ejikọta ogidi na Excel
Usoro 5: gbakwunye ihe odide ọzọ
Ọrụ Iji kee enwere ike iji ya tinyekwuo ihe odide na okwu ndị na-anọghị na ntinye mbụ. Ọzọkwa, iji ọrụ a, ị nwere ike itinye ndị ọrụ ndị ọzọ.
Mee omume iji gbakwunye ụkpụrụ na window arụmụka arụmọrụ iji ụdị ọ bụla akọwapụtara n'elu. Na otu n'ime ubi (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịnwe ọtụtụ n'ime ha) anyị na-agbakwunye ihe ọ bụla ederede nke onye ọrụ ahụ weere dị mkpa iji gbakwunye. Edere ederede a na ntinye. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbe ihe a gasịrị, a gbakwunyere ihe ederede na data jikọtara.
Onye ọrụ Iji kee - Nanị ụzọ isi jikọọ sel na-enweghị ihe ọ bụla na Excel. Tụkwasị na nke a, enwere ike iji ya jikọọ ogidi niile, gbakwunye ụkpụrụ ederede, rụọ ọrụ ndị ọzọ. Ịmara maka algọridim maka ịrụ ọrụ a ga-eme ka ọ dịkwuo mfe idozi ọtụtụ ajụjụ maka onye ọrụ nke usoro ihe omume ahụ.